Haaruun iyo Qaramada Midoobey kee Runta u Dhaw? | allsanaag
Haaruun iyo Qaramada Midoobey kee Runta u Dhaw?
Musharixiinta halka beel ka soo wadda jeeda, ee uu fadhigooda yahay magaalada Muqdisho, ayaa maalmahan waxeey wadeen sheeko ku saabsan warbixin ay Qaramada Midoobey ay soo saartay oo ah in ciidankii tababarka loogu qaaday dalka Ereeteriya in loo adeegsaday dagaalkii lagu qaaday Tigreeyga.
Warbixinta dadka soo qoray ma’ahan kuwo dalka Ereeteriya dhex tagay oo soo arkay ciidankii Soomaalida oo xabadda ku ridaya Tigreeyga, dhaawacoodii iyo meedkoodii oo la keenay cisbitaalada. Hase ahaatee, warbixinta Qaramada Midoobay waa mid ku salleeysan “Waxaa la yiri”, oo aan ku salleeysneeyn xaqiiq la taaban karo.
Kuwa warbixinta soo qoray waxeey ku leeyihiin, warar lagu kalsoon yahay ayaa soo tabinaya in ciidamadii Soomaalida ee tababarka u socoday laga kaxeeyey xerraddii lagu tababarayey, waxaana loo qaaday goobta dagaalka ee gobolka Tigreeyga. Waxeey kalloo yiraahdeeyn kuwa warbixinta soo qoray ciidamada Soomaalida ayaa lagu arkay nawaaxiga Aksum.
Ciidamada Itoobiya iyo Ereeteeriya waxa ay waqti yar ku soo af jareeyn ciidankii tigreeyga, mana jirto baahi keeni karta in ciidan ay u baahdaan. Qofka wuxuu maleeyshiyaad iyo ciidan kale u yeertaa marka laga xoog batto, laakiin sabab ciidan Soomaaliyeed loogu baahdo meesha kama muuqato.
Hadaba waxaa ayaan darro ah in warbixin aan xaqiiq ku fadhiyin ay mushariixta halka beel ka kooban ay la soo shir tagaan, iyagoo iska dhigaya kuwo ka naxaya waalidiintii carruurtooda tababarka loogu qaaday Ereeteriya. Ragii rabay in Muqdisho dagaal ay ka riddaan oo dadka ay barakiciyaan ayaa maanta is oohisiinaya, iyagoo ujeedkooda ugu weeyna uu yahay Farmaajo ku xummeey.
Haaruuf Macruuf dhawaan waxa uu la hadlay waalidiinta dhalay carruurta iyo xaasaska qaar ka mid ah ciidankii Ereeteeriya loo qaaday, waxeeyna u sheegeeyn in warkaas uusan waxba ka jirin ee ah ciidan dagaal loo qaaday. Musharixiinta halka beel ka kooban ayaa waxee leeyihiin Haaruun Macruuf warbixintiisa nama galleeyso, balse nin ka tirsan Qaramada Midoobey oo meesha la maraya “Waxaa la yiri” waan qaadaneeynaa. Caqliyadaas ayaa doonaya ineey dal iyo dad hoggaamiyaan.
← Garoonka diyaaradaha Boosaaso oo bilaabaya duulimaadyada caalamiga ah Qasriga cusub ee Madaxtooyada Garoow →